Focaccia ပေါင်မုန့်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက် + ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - Sugar Geek Show ဖြင့်ပြုလုပ်နည်း - တဆေး
Focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာသည်လှပသောစားနိုင်သောအနုပညာကိုပြုလုပ်ရန် focaccia လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအလှဆင်သည့်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာပြုလုပ်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းရုံသာမကအရသာလည်းပါသည်။ ဤအစားသုံးနိုင်သောအနုပညာလက်ရာများကိုတီထွင်ခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းသည် Instagram ပေါ်တွင်စပျစ်ဥယျာဉ် Baker မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ ငါသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစနှစ်ခုလုပ်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီကိုအလှဆင်ဖို့တစ်ဝက်တွင် focaccia တ ဦး တည်းအသုတ်ဖြတ်တောက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါကငါ့သမီးနှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကျနော်တို့ပေါက်ကွဲမှုခဲ့!
ငါဒီ focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုးစားချင်တယ်။ ငါမြင်သောမှော်မုန့်အနုပညာနှင့်အတူစွဲလမ်းနေပါတယ် စပျစ်ဥယျာဉ် Bakers စာမျက်နှာ ။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Vincent Van Dough အမည်ရှိနေကြာကြာဖြစ်သည်။ ငါကောင်းတဲ့ပေါင်မုန့်ကိုကြိုက်တယ်။ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်နေချိန်မှာကမ္ဘာကြီးဟာသီးသန့်ထားရှိထားတာကြောင့်ငါတို့နေ့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကလေးတွေကိုအလုပ်များနေအောင်ပျော်စရာစီမံကိန်းများစွာနဲ့ပြည့်နေတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ငါးနှစ်အရွယ် Avalon နဲ့ကျွန်တော်အတူတကွလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ပဲ။
အားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် focaccia ကိုအချိန်မတိုင်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသဖြင့်သူမလုပ်ခဲ့သမျှအလှဆင်ခဲ့သည်!
focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာအတွက်ဘာ toppings ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း
အနီရောင်ကြက်သွန်နီ - ပန်းတွေနဲ့တူအောင်ပါးလွှာအောင်အချပ်
Mini Bell Peppers - နေရောင်ခြည်အကြီးများပြုလုပ်ရန်အတွက်သေးငယ်သောပန်းများသို့မဟုတ်အလျားလိုက်အလျားလိုက်အလှည့်အပြောင်းများဖြစ်စေရန် - ဒေါင်လိုက်အလှည့်ကျ (ဒါကြောင့်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိနေသည်)!
Chives - ကြီးစွာသောပန်းပွင့်ကိုလုပ်ပါ
အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီ - ပန်းပွင့်တွေ၊
Parsley - အရွက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော
Basil - အရွက်များသို့မဟုတ်ပင်လယ်ရေမှော်များအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးများ - အရှည်တစ်ဝက်လောက်ဖြတ်ပြီးစက္ကူသုတ်ပဝါနဲ့အခြောက်ခံလိုက်တယ်။ ကြီးသောပန်းပွင့်စင်တာများသို့မဟုတ်မျိုးစေ့သီးတောင့်များပြုလုပ်သည်
သံလွင်သီး - ပန်းများသို့မဟုတ်ကျောက်တုံးများ၏အလယ်ဗဟို
Capers - မျိုးစေ့သီးတောင့်များ
Rosemary - သေးငယ်တဲ့အပင်များ
စမုန်ဖြူ - သေးငယ်တဲ့အပင်များ
Pepperoni - ငါတို့ကိုငါးအဖြစ်ပုံသွင်းခဲ့တယ်
ဝက်အူချောင်း - ပန်းစင်များသို့မဟုတ်မျိုးစေ့သီးတောင့်များ
ဖျက်စီး Parmesan - သဲသို့မဟုတ်ဖုန်
ခရမ်းချဉ်သီး - လုပ်ရန်ချွန်ထက်သောဓားကိုအသုံးပြုပါ ခရမ်းချဉ်သီးနှင်းဆီပန်း !
သင် focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်၏လွယ်ကူသော focaccia ပေါင်မုန့်စာဖြင့်စတင်ပါ။ ငါမုန့်ဖုတ်ချင်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ဒီမုန့်စိမ်းကိုရောစပ်လိုက်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရှည်လျားတဲ့သက်သေပြမှုက၎င်းကိုအရသာရှိစေပြီးပါးလွှာပြီးကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အပေါ်ယံလွှာနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ chewy အတွင်းပိုင်းကိုပေးသည်။
ရက် 1 - မွန်းလွဲပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် focaccia မုန့်စိမ်းကိုရောစပ်။ နွေးထွေးသောºရိယာ (၇၀ ºF) တွင်အမြောက်အများအချဉ်ပေါက်ခြင်းအဖြစ်သို့ဖယ်ထားလိုက်သည်။ မုန့်စိမ်းထဲရှိဆီပမာဏများပြားလာခြင်းနှင့်သင်၏အခန်းနွေးထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ ၂-၃ နာရီမှမည်သည့်နေရာ၌မဆိုကြာနိုင်သည်။ ပူလေလေ၊ မုန့်စိမ်းသည်မြန်လေလေဖြစ်သည်။
မုန့်စိမ်းကိုဒယ်အိုးပေါ်သို့ဆန့်လော့။ ငါနှစ်ဆအသုတ်လုပ်ပေမယ့်သင်တစ် ဦး တည်းအသုတ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုနေလျှင်, သင်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာဒယ်အိုး၏အလယ်၌အကြမ်းဖျင်းပုံဖော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအစွန်းအထိလမ်းတလျှောက်လုံး။ ဤတွင် Vineyard Baker ၏လှပသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နေ့2- သင်၏ focaccia ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူပြီးမိနစ် ၃၀ ခန့်အခန်းအပူချိန်သို့ရောက်စေပါ။ သငျသညျမုန့်စိမ်းသည်သင်၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖုံးလွှမ်းမထားဘူးဒါကြောင့်သင်အလှဆင်မတိုင်မီမုန့်စိမ်းကောင်းတဲ့နှင့် bubbly ချင်တယ်။ ငါ focaccia နွေးနေစဉ်ငါ့ toppings prep ကြိုက်တယ်။
ပုံမှန် focaccia ၏ထိပ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းဖျက်ပါ။ သင်၏သံလွင်ဆီနှင့် flakey ဆားများကိုထည့်ပါ။ စာရွက်ထဲမှာညွှန်ကြားထားသည်အတိုင်း။ ယခုသင်သည်အလှဆင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ! ရူးသွားတယ်! ပျော်ပါစေ! focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာအတွက်အနုပညာထားပါ!
သင်၏ focaccia ကိုထိပ်ဆုံးမှပြီးနောက်သင်မုန့်ဖုတ်နေစဉ်၎င်းတို့မီးမရှို့စေရန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားသံလွင်ဆီအလွှာဖြင့်လိမ်းပေးပါ။
သင်၏ focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာနှင့်အတူဖန်တီးရန်အချိန်ကောင်းပါ! သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ။ သင် Pinterest တွင် focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာကိုရှာဖွေလျှင်သင်လှုံ့ဆော်မှုတန်ချိန်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Avalon ဟာပင်လယ်ပြင်ကိုသွားတဲ့အတွက်သူမမှာငါးတွေ၊ အထူးသဖြင့် Avalon ဟာလှီးဖြတ်မျောမျောမျောမျောမျောမျောတွေအသုံးပြုတဲ့နေရာကိုသူတို့နှစ်သက်တဲ့အတွက်ရေဘဝဲရေကူးပုံနဲ့တူတယ်။ အရမ်းလိမ္မာတယ်
နှစ် ဦး စလုံးအရသာရှိကြ၏
သင်၌ကျန်ရှိသောမုန့်ကျန်ရှိပါက၎င်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်။ ရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းထားပါ။ ၃၀ ºFရှိမီးဖိုထဲတွင် ၁၀ မိနစ်ဖုတ်ရမည်၊ အစာမစားမှီလန်းဆန်းစေပြီးအသစ်ကဲ့သို့ကောင်းသောအရသာရှိမည်။
ဒါ လွယ်ကူသော focaccia စာရွက် အကောင်းဆုံး ရောစပ်ခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ သူတို့အားလှပသော focaccia ပေါင်မုန့်အနုပညာစီမံကိန်းများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၂၅ မိနစ် အနားယူသည်၁ ဃ ၂၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ၁၆၈kcal
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) ပူနွေးသောရေ (110ºF) ကိုဖလားနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည် ၂ ခွက်
▢၁ ဇွန်း သကြားဓာတ်
▢၇ ဂရမ် (၇ ဂရမ်) တက်ကြွခြောက်သွေ့သောတဆေး (၂ 1/2 ​​လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
▢နှစ် အောင်စ (57 ဆ) သံလွင်ဆီ 1/4 ခွက်ဖလား
▢၁ ဇွန်း flakey ဆား
▢၂၄ အောင်စ (680 ဆ) ပေါင်မုန့် (သို့) ဘက်စုံသုံးမုန့်ညက် (၅ ခွက်ဇွန်းနှင့်တန်းစီ)
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) သံလွင်ဆီ မြင့်တက်ပြီးနောက် focaccia ၏ထိပ်ပေါ်တွင်ဒယ်အိုးနှင့်မိုးရေအတွက် (1/2 ခွက်)
▢နှစ် ဇွန်း လတ်ဆတ်သော Rosemary ကုန်တယ်
သင်၏ပထမဆုံးရေပူရေအေးကိုသင်၏တဆေးနှင့်သကြားနှင့်ရောစပ်။ ရောနှောပါ။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန် ၅ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်မြှုပ်မထားမှီအထိထားပါ
ရေ / တဆေးရောနှောခြင်းကိုသင်၏ရပ်တည်မှုရောနှောထားသောအိုးတွင်ထည့်ပြီးပေါင်မုန့်ချိတ်ကိုထည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းဤမုန့်စိမ်းတစ်ပန်းကန်နှင့်ဇွန်းနှင့်အတူလက်ဖြင့်လည်းလုပ်နိုင်ပေမယ့်သင်အချို့သောတံတောင်ဆစ်အမဲဆီသုံးပါရန်ရှိသည်။
ကျန်ရှိသောကျန်ရေများ၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆားနှင့်ကျန်ရှိနေသောဂျုံမှုန့်၏ထက်ဝက်ကိုထည့်ပါ။ ပေါင်းစပ်သည်အထိအနိမ့်အပေါ်ရောမွှေပါ
မုန့်စိမ်းပန်းကန်လုံး၏နှစ်ဖက်မှဆွဲထုတ်သည်အထိအနိမ့်အပေါ်ရောနှောနေစဉ်သင်၏မုန့်ညက်အတွက်ဆက်ပြောသည်ကိုဆက်လက်။ ဒါ့အပြင်စေးကပ်လွန်းနေရင်ဇွန်းဂျုံမှုန့်ပေါင်းထည့်ပါ။ မုန့်စိမ်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းလိမ့်မည်
သင်၏မုန့်စိမ်းသည်လုံလောက်သော gluten မဖြစ်ပေါ်မှီအထိသင်ရောနှောနေပါကသင်ထိသောအခါ၎င်းသည်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မည်။ ငါမုန့်စိမ်းကိုပန်းကန်ထဲမှထုတ်ယူပြီးလျှင်မုန့်စိမ်းပြန်ထွက်လာသည်အထိနှစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သူသည်ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ပွားပြီးသွားသည်။
သင်၏မုန့်စိမ်းကိုဇွန်းတစ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပြီးဇွန်းထဲသို့ထည့်ပါ။ ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးအဖုံးအုပ်ပြီး ၁-၂ နာရီ (သို့) နှစ်ဆတိုးသည်အထိပူနွေးသောနေရာ၌ထပါ။ သငျသညျတက်ကြွခြောက်သွေ့သောတဆေးကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကနှစ်ဆအထောက်အထားမှကြာကြာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုသတိထားပါ။
အလုံအလောက်သံလွင်ဆီကို 12'x17 'sheet pan pan (သို့မဟုတ်အလားတူအရွယ်အစားရှိသောဒယ်အိုး) ထဲသို့သွန်းလောင်းပါ။ ထို့ကြောင့်ဆီအောက်လွှာတစ်ခုလုံးဖုံးအုပ်ထားသည့်ဆီလွှာပါးလွှာသည်။
ကပ်ထားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သံလွင်ဆီအချို့ကိုလက်ထဲထည့်ပြီးပန်းကန်ထဲမှ focaccia မုန့်စိမ်းကိုထုတ်ယူပါ။ အရမ်းချောင်ပါတယ် သငျသညျ deisre လျှင်နှစ်ခုသို့ပိုင်းခြား။ ၎င်းကိုဒယ်အိုးထဲတွင်ထားပြီးလျှင်စတင်ပါ။ ပြန်ကျုံ့သွားလျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်အကွာလမ်းလျှောက်ပါ။ သင်တစ်ဝက်ခွဲလိုက်လျှင်အနားသို့ရောက်ရန်စိတ်မပူပါနှင့်။
မင်းရဲ့ပေါင်မုန့်ဖုတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ရေခဲသေတ္တာထဲကယူပြီးမိနစ် ၃၀ လောက်ပူနွေးစေပါ။ သံလွင်ဆီများစုဆောင်းနိုင်သောနေရာအချို့ကိုဖန်တီးရန်သင့်ဆီကိုလက်ချောင်းများဖြင့်မျက်နှာပြင်မှိန်သွားစေပါ။
ထောင့်လုံးအားလုံး၌ဆီအနည်းငယ်ကျန်ရှိသည့်အထိသံလွင်ဆီအမြောက်အများကိုပေါင်မုန့်ထိပ်ပေါ်သို့သွန်းလောင်းပါ။ ထိပ်တွင် flakey ဆားဖြန်း။
သင်၏ focaccia သည်မိနစ် ၃၀ ခန့်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အသားများဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုထိပ်ကိုအလှဆင်ပါ။ ပိုမိုသောအကြံဥာဏ်များအတွက်အထက်ရှိ blog post ကိုကြည့်ပါ။
မီးဖို၌450ºFမိနစ် ၂၀ မှ ၂၅ မိနစ်အထိ focaccia ပေါင်မုန့်သည်ရွှေဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဖုတ်ရမည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ toppings ၏, ဒီမုန့်ကိုအကောင်းဆုံးနေ့၏ပျော်မွေ့သည်။ ကျန်တဲ့ရေခဲသေတ္တာ။ ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်မုန့်ကိုမီးဖို၌ ၅-၁၀ မိနစ်ကြာထပ်ခါထပ်ခါအပူပေးခြင်းဖြင့်ထိုပီကေကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။
မုန့်စိမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်၏မုန့်စိမ်းကိုမီးဖိုဘေးတွင် ၁၇၀ ºFထားပါ။ ကျွန်ုပ်အခန်းသည်နွေးလျှင် ၁ နာရီခန့်သာကြာလေ့ရှိသည်။ သင်၏ focaccia အအေးမိခြင်းကိုမိနစ် ၃၀ ခန့်ထွန်းညှိ။ အဖုံးကိုဖုံးအုပ်ထားခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အလှဆင်ခြင်းမပြုမီပြုလုပ်ပါ မီးဖို၌လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန် toppings ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖြင့်စင်ပါ
Moist & Fluffy Vanilla မယားစကား
အနီရောင်ကတ္တီပါ box ကိုကိတ်မုန့်အိမ်လုပ်အရသာအောင်ဘယ်လို
ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး fondant ထဲကဘယ်လိုလုပ်ဖို့
ဝိုင် Gummy ချက်နည်း
ကျွန်ုပ်၏Roséဝိုင် gummy စာရွက်သည်အချိုပွဲစားပွဲများ၊ မျက်နှာသစ်များ၊ ပါဝင်မှုလေးမျိုးသာရှိသည်။
အီတလီ meringue buttercream သည်အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်ဆုံးသောစားသောက်ကုန်ဖြစ်သည်။ မချိုလွန်းနှင့်တောက်ပချောမွေ့။
လွယ်ကူသော Buttercream ပန်းများ
အစစ်ခံသူများအတွက်လွယ်ကူသော buttercream ပန်းပွင့်များ! သင်၏ buttercream ကိုမည်သို့ရောနှောရမည်နည်း၊ မည်သည့်ကိရိယာများသုံးရန်နှင့်ရိုးရိုး5ပွင့်ပွင့်သော buttercream ပန်းပွင့်ကိုမည်သို့သယ်ယူရမည်နည်း။